I-Loft Apartment enembonakalo enomtsalane yaseKapa
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguTrudy
Hamba kwithala leencwadi labucala kunye nebha ukuze ungene kule ndawo iqaqambileyo, nephefumlayo. Ifakwe kwimbali yekhaya likaEdward, ingaphakathi lipholile kwaye liyamema. Ngena kwiingcango zaseFransi kwaye ujonge iimbono eziphefumlayo zeKapa ukusuka kwibalcony.
Ibhalkhoni, Ifriji encinci, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, Ikhitshi elincinci, I-Queen bed, I-TV, Ukubona iintaba, Ukubona ulwandle, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.82 (iingxelo zokuhlola 51)
Le ndlu ikwindawo ezolileyo, kodwa ikufutshane neendawo zokutyela ezilungileyo, iithiyetha, kunye neemyuziyam eKapa. Kukuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka kwiindawo ezithandwayo zokunyuka intaba, kunye nemizuzu eyi-10 yokuqhuba ukuya elunxwemeni.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3000